भारतबाट आएकाहरुको लागि सरकारले गर्याे र्‍यापिड टेष्ट गर्ने तयारी, तर कुन-कुन जिल्ला ? — Imandarmedia.com
भारतबाट आएकाहरुको लागि सरकारले गर्याे र्‍यापिड टेष्ट गर्ने तयारी, तर कुन-कुन जिल्ला ?
काठमाडौं । सरकारले भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षण गर्ने तयारी थालेको छ । यसबारे आज बस्ने कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिमा छलफल हुने एक मन्त्रीले बताए । सरकारले लकडाउनमा कडाइ गर्दै एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा जान रोक लगाउने तथा कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा पनि यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सुदूरपश्चिमलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । यसबारे थप अर्काे आइतबार उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्ने तयारी छ । उनकाअनुुुसार अहिले हरेक स्थानीय तहले भारतबाट आएका नागरिकहरुको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । र, प्रारम्भीक सूचनाअनुसार यस्तो संख्या ५० हजार बढी रहेको देखिन्छ ।
तर उनीहरुमध्ये निकै सानो संख्यामा मात्र प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा छन् । स्थानीय तहहरुले बनाएका क्वारेन्टाइनहरु पनि मापदण्ड पुगेका छैनन् भने होम क्वारेन्टाइनमा राम्रोसँग पालना भएको छैन ।अब अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्नुका साथै र्‍यापिड टेष्ट गर्ने सरकारको तयारी छ ।
एक मन्त्री भन्छन् अब भारतबाट धेरैभन्दा धेरैलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउँछौं । यसका लागि अब ¥यापिड टेष्टको विकल्प छैन ।र्‍यापिड टेष्टलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले मान्यता दिएको छैन, तर यसले सम्भावित संक्रमितहरुको पहिचान गर्न मद्दत गर्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा.खेम कार्की भन्छन्, ‘हाम्रो ल्याबले दिनमा १२/१५ वटा भन्दा टेष्ट गर्न सक्दैन । त्यसले अब र्‍यापिड टेष्टमा जाने बेला भयो । र्‍यापिड टेष्टमा जसको पोजेटिभ आउँछ, उनीहरुलाई पीसीआर वा ल्याबमा थप टेष्ट गर्छाैँ।
यसैबीच सरकारले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बसेको १७ औं बैठकले देशैभर ५० हजार स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।